Nsɛm A Ɔhyɛ Dzen Na Ɔhyɛ Nkuran | Akenkan & Nkyerɛkyerɛ
Nsɛm A Ɔhyɛ Dzen Na Ɔhyɛ Nkuran
DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Fa w’adwen si ndzɛmba a obotum edzi ɔhaw bi ho dwuma nye ndzɛmba a obotum ahyɛ afofor dzen no do.
Nya w’etsiefo no ho adwempa. Nya awerɛhyɛmu dɛ wo mfɛfo agyedzifo no pɛ dɛ wɔsɔ Jehovah n’enyi. Sɛ otwar dɛ edze afotu bi ma w’etsiefo no mpo a, ber biara a ɔbɛyɛ yie no, dzi kan fi w’akoma mu kamfo hɔn.
Fi ɔdɔ mu kasa, na nnyɛ ebufuw mu. Serew kyerɛ w’etsiefo no na ama woeehu dɛ epɛ hɔn asɛm na wobotum enya wo mu ahotodo.
Nsɛm a ɔnnhyɛ dzen no, tsew do. Kã ɔhaw ahorow ho asɛm aber a no ho behia wɔ wo kasa no mu nkotsee. Ɔsɛ dɛ wo nsɛm a ebɛkã no nyinara hyɛ dzen.
Fa Nyankopɔn n’Asɛm no dzi dwuma yie. Asɛntsir a erekyerɛkyerɛ mu no, sɛ ebɛkã ne fã bi a ɔnnhyɛ dzen a, hwɛ hu dɛ ɔdze mfaso bi bɛba ana akã. Sɛ iwie wo nsɛm no nyinara a, ɔsɛ dɛ w’etsiefo no tse nka dɛ ahyɛ hɔn dzen.
Bu obiara a enye no bɛkasa no dɛ obotum abɔsom Jehovah.
Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ​—Nsɛm A Ɔhyɛ Dzen Na Ɔhyɛ Nkuran